“Ciyaartoyda Barcelona waxay ii sheegeen inay hareen, ma ahan kulan aan weligeey ilaawi doono.”. Verratti oo aad u calaacalay - Gool FM	twitter
“Ciyaartoyda Barcelona waxay ii sheegeen inay hareen, ma ahan kulan aan weligeey ilaawi doono.”. Verratti oo aad u calaacalay
(Catalonia) 09 Mar 2017. Barcelona ayaa xalay Champions League ka dhigtay taariikh aan ebid horey loo arag kaddib markii ay 6-1 ku martay PSG oo lugtii hore ee wareega 16 kaga soo adkaatay 4-gool oo nadiif ah.
Cavani ayaa xaalada ku xumeeyay Barca kaddib markii uu gool ka dhaliyay mar ay 3-gool lahaayeen daqiiqadii 62-aad, taa oo khasabtay in Barcelona ay u baahnaato saddex gool oo kale.
Laakiin isma dhigan wiilasha reer Catalonia oo daqiiqadihii dambe ayay dhaliyeen saddexda gool iyadoo goolka guusha uu u dhaliyay Sergio Roberto daqiiqadii 95-aad.
Kubbad qaabeeyaha PSG Marco Verratti ayaa liqi waayay sheekadan isagoo daaha ka rogay in xitaa ciyaartoyda Barcelona ay u sheegeen inay howsha isku dhammaatay oo ay ka hareen tartanka ka hor inta aysan sameyn soo laabashadii mucjisada lahayd.
“Kaddib goolkii Cavani waxaan helnay xoogaa xasilooni ah,” Verratti ayaa sidaa u sheegay L’Equipe.
“Intaa kaddib waxaan la hadlay ciyaartoyda Barcelona waxay ii sheegeen inay isku dhammaatay sheekada.
“Fasiraad uma heli karo saddex gool oo 7-daqiiqo lagu dhaliyay, waa kubbada cagta.
“Waa kulan aan weligeey ilaawi doonin, waxaan rajeynayaa inay qof kasta cashir u noqon doonto.
Verratti oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray:
“Barcelona way u qalantay soo bixitaanka, way adkeyd inaan ciyaarno, inaan baasas sameyno. Si daran ayay cadaadis inoo saareen qeybtii hore, qeybtii labaad si fiican ayaan u ciyaarnay.
“Waa inaan helnaa awooda aan madaxeena kor ugu qaadno, waa inaan Rag noqonaa. Dhammaan waan murugeysannahay, waxaa nalooga adkaaday 6-1 ma ahan inuu sababta lahaa garsooraha innagaa ka masuul ah ugu horreyn.”.